Lixabiso Ngeendiza & Wood isityumzi Machine Suppliers kunye Factory | YiZheng
Yintoni i-Straw & Wood Crusher?
Inkqubo ye- Ngeendiza & Wood isityumzi ngesiseko sokufunxa izibonelelo zezinye iintlobo ezininzi zesityumzi kunye nokongeza umsebenzi omtsha wokusika idiski, iyenza isebenzise ngokupheleleyo imigaqo yokutyumza kwaye idibanise iitekhnoloji zokutyumza ukubetha, ukusika, ukungqubana kunye nokuguba.
Yenzelwa ntoni into yokucheba iinkuni zomququ?
Inkqubo ye- Ngeendiza & Wood isityumzi Ingasetyenziselwa ukutyumza uqalo, amasebe, ixolo, amagqabi, iziqwengana, iziqwengana, irayisi yamakhaka, isarhasi, ifomwork, isikhwebu sengqolowa, umququ, umqhaphu, njl, njl. i-particleboard, i-sawdust, ibhodi ephezulu kakhulu, ibhodi ye-fiber ephakathi kunye neminye imveliso.
Inkqubo ye- Ngeendiza & Wood isityumzi yaziwa ngokuba isityumzi ezilahliweyo multi-functional ezifana iinkuni isityumzi, amasebe isityumzi amancinci, port port isityumzi. Idibanisa iingenelo isando isityumzi iinkuni kunye ukusika-idiskhi isityumzi iinkuni. Ukondla izibuko elinye lokondla isigodo, elinye ukondla izibuko lokondla amasebe, izinto zenkunkuma zebhodi njalo njalo. Iqhubekekisa izinto ezingafunekiyo ezinobubanzi obungaphantsi kwe-250mm kubungakanani beesarust kwi-1-40mm.
Iimpawu ze Ngeendiza & Wood isityumzi Machine
(1) Inotyalo-mali olusezantsi, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, imveliso ephezulu, izibonelelo ezilungileyo zoqoqosho, kunye nokusetyenziswa okufanelekileyo kunye nokugcinwa
(2) Ukusebenza okuninzi Ngeendiza & Wood isityumzi ngobuchule bokuvelisa okuphezulu, ukusetyenziswa okulula, ulondolozo olufanelekileyo kunye noluhlu olubanzi lokondla
(3) Inkqubo ye- Ngeendiza & Wood isityumzi Ingasetyenziswa njengomatshini oxhasayo wokulungiselela kunye nokuveliswa kwezinto ezinokutya zenkcubeko yefungus kunye nokulungiswa kwemveliso yamashishini okusila iphepha, izityalo zefiberboard, izityalo zeepartboard, kunye nezityalo zeMDF.
(4) Inkqubo ye- Ngeendiza & Wood isityumzi idibanisa iingenelo zehamile-uhlobo iinkuni umatshini ityunyuzwa kunye nemela-idiskhi umatshini ityumza umatshini.
(5) Injini yombane / idizili enokukhethwa ngokweemfuno ezizizo;
(6) amavili olukhethekayo obandayo kwaye unikeze ezinye uyilo elicwangcisiweyo.
Ngeendiza & Wood isityumzi Video Bonisa
Ukukhethwa kweModeli ye-Straw & Wood Crusher
Iiparamitha ze-Straw & Wood Crusher
Ujikeleziso lobubanzi bentloko mgawuli （mm）
Inani labasiki bokubetha (iziqwenga)
Inani ukusika iincakuba (izandla)
Ubungakanani bendawo yokungena
Isantya yokuluka (rev / min)
Qaphela: Amandla edizili eselfowuni anokwenziwa ngokweemfuno zokwenyani.
Egqithileyo Umatshini wokuchumisa umatshini weCage Mill
Okulandelayo: Umatshini weSixube seShaft esiphindwe kabini
Intshayelelo Yintoni ilifti yebhakethi esetyenziselwa yona? Izinyusi zebhakethi zinokuphatha izinto ezahlukeneyo, kwaye ke zisetyenziswa kwimizi mveliso eyahlukeneyo nakwizicelo, nangona kunjalo, azikulungelanga ukumanzi, izinto ezincangathi, okanye izinto ezinamathele okanye ezihlala zikumatshini okanye ...